Itoobiya:Haweeney Loo Doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAItoobiya:Haweeney Loo Doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada
November 22, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Itoobiya:Haweeney Loo Doortay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada
Gabadh dibad joog ah oo horay garsoore u soo noqotay mucaaradka magaca lehna ka mid ah ayaa loo xushay in ay hoggaamiso guddiga doorashada qaran ee dalka Itoobiya.
Arrintan ayaa noqnaysa darajo kale oo heer sare ah oo dawladdu ay siisay qof dumar ah.
Birtukan Mideska ayaa bishan horraanteedii uun ku laabatay dalka Itoobiya ka dib markii ay toddoba sano dibad joog ku hayd dalka Maraykanka.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa meel mariyay magacaabidda Birtukan Mideska.
Birtukan ayaa lagu xukumay xabsi daa’in ka dib doorashadii aadka loogu loolamay ee sannadkii 2005tii.
Garsoorahan hore ayaase hadda dusha kala socon doonta doorasha guud ee dalka Itoobiya ka dhici doonta bisha May ee 2020.
Caqabadda ugu wayn ee ay wajahayso waa in ay hagaajiso sumcadda guddiga doorashada oo si joogto ah loogu eedeeyo in dawladdu ay farogaliso guddiga.
Ra’iisulwasaare Abiy Axmed ayaa isbadallo ballaaran la yimid kuwaas oo ay ka mid yihiin in uu la heshiiyay dalka ay dariska yihiin ee Eritrea, in uu siidaayay maxaabiistii siyaasadda iyo in uu soo dhaweeyay mucaaradkii hubaysnaa ee dibad joogga ahaa.
651,079 total views, 5,395 views today
651,079 total views, 5,395 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
650,953 total views, 5,398 views today
650,953 total views, 5,398 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
650,982 total views, 5,394 views today
650,982 total views, 5,394 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
651,043 total views, 5,397 views today
651,043 total views, 5,397 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,104 total views, 5,398 views today
651,104 total views, 5,398 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]